Marqaanmedia|Daily News » TOP NEWS+DAAWO VIDEO: Xisbiyada Soomaaliand oo isku Fahmi Waayay Doorashada+Gacantana iskula Tagi Gaaray
TOP NEWS+DAAWO VIDEO: Xisbiyada Soomaaliand oo isku Fahmi Waayay Doorashada+Gacantana iskula Tagi Gaaray
Hogaamiyaasha xisbiyada Soomaaliand ayaa kulamo La isku fahmi waayay ku qaatay Magaalada Hargeysa ee Xarunta Soomaaliand.
Kulamadaan ayaa waxaa looga hadlayay arimaha la xariira Doorashada Soomaaliand iyo sida loo Wajahayo.
Xisbiga Talada Haya ayaa ku adkeeysanaya in Guddiga Doorashooyinka loo Daayo Sida uu Sheegay Muuse Biixi Yoonis.
Dhanka kale Xisbiyada kale Ucid iyo Wadani ayaa iyaguna isku Moowqif noqday waxaana ay ku doodayaan in Marka hore Diirada la saaro abaarta dadkiina ay Haraad iyo Gaajo ay u dhimanayaan.
4 Responses to TOP NEWS+DAAWO VIDEO: Xisbiyada Soomaaliand oo isku Fahmi Waayay Doorashada+Gacantana iskula Tagi Gaaray
Cismaan Cawad says:	January 10, 2017 at 3:39 pm	* HALISTA DAAHSOON *
Labo dhacdooyin ee si lama filaan ah dunida uga dhacay sanadkii hadda dhammaaday waxaa ay adduunyada ku rideen fajiciso weyn ee filan waa ku noqotay aqoonyahannada iyo khubarada reer Galbeedka. Ilaa iyo sanadkaasi na dhaafay adduunyadu waxaa ay ku dhaqmaysay nidaamka siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee ku mataaneysan ee loo yaqiinnay “neo-liberalism”. Waxaa uu ahaa nidaam ku salaysan madax bannaanida shakhsiga, xurriyad siyaasadeed, suuq ganacsiyeed caalami ah ee isku xidhan iyo hannaan dawladnimo ee ah federaalism dimuqraddiyadeed. Waxaa nidaamkaasi gundhig u ahaa ganacsiga dunida oo lagu hayo ilaalo xooggan si aan waddamada saboolka ahi boob iyo dhac loogu geysanin oo ay suuqa ganacsiga ee caalamiga uga ganacsadaan. Inta badanna waxaa nidaamkaasi dabada ka riixaayay waddamada Midowga Yurubta (European Union) iyo Canada.
Cismaan Cawad says:	January 10, 2017 at 3:52 pm	Dhacdooyinkaasi waa aftidii lama filaanka ahayd ee dalka UK looga codeeyay in uu ka baxo gebi ahaan Midowga Yurubta iyo doorashadii uu si filan waaga ah ugu soo baxay ninka la yidhaahdo Donald Trump. Waxaa fajiciso ka dhigay in aftidaasi iyo doorashadaasi ay ku suuroobeen ololooyin ku salaysnaa cunsuriyad cad, been qayaxan iyo shucuur casabanimo ee ay muujiyeen siyaasiyiin, saxaafiyiin iyo shacabka caddaanka Ingiriiska ee dhaladka ah. Waxaa uu caalamku ku naxsaday in haddii ba ay taasu labdan da ka suurowday ay dunidu ku waa bariisatay nidaam caalami ah oo cusub ee kana duwan kii saaxiga ahaa, waxaana loogu magac daray casriga beentu run noqotay ee “post-truth era”. Halista ka imanaysaa waa maxay?
Cismaan Cawad says:	January 10, 2017 at 4:04 pm	Halista ka dhalanaysa ee aan anigu u soo xiganayo dadkayga Soomaaliyeed waxaa weeye in:
(a) ay shirkado ganacsiyeed ee waa weyn ee awal sharciga suuqa ganacsi ee caalamiga ka cabsi qabay ay haatan waddamada saboolka ah qaab musuq maasuq ah dhaqaalahooda kula wareegi doonaan iyaga oo ka dhisan doona dawlado iyaga jeebka oogu jira. Waxaa ay taasu u sahli doontaa in ay curyaamiyaan wax soosaarka waddamadaasi saboolka ah oo ay deeto ku soo qarqiyaan badeecado jaban iyo cuntooyin iyo daawooyin sumeysan.
(b) dalalka dhaqanka xun sida Ruushka iyo Iraan ee awal ka cabsan jiray awoodda reer Galbeedka ay saameyn siyaasadeed ee xoog leh ku yeelan doonaan waddamada saboolka ah sida Soomaaliya. Waxaa ay iyaga iyo shirkadahaasu adeegsan doonaan musuq baaxad leh ee ay ku kala xadayaan siyaasiyiinta dhuuniqaateyaasha ah waddamadan saboolka ah sutida u sida.
Cismaan Cawad says:	January 10, 2017 at 4:15 pm	Waxa aynu ka dheefi doonnaa waa ciid la sumeeyay, cuntada sumeysan ee GM loo yaqaanno, hub faro badan oo dalka lagu soo daayo, baddeena oo sunta halista ah ee nuukliyarka lagu shubo, jariif kii hore ka sii ba’an, maleeshiyo beeleed la isku hubeeyay, kheyraadka dalka oo la daldasho, xanuunno aan la aqoon oo dalka ka dillaaca, caruurta curyaaman oo ay dhalmadoodu badato, abaaro daba dheeraada iyo baahi baahsan. Adduunyadu haatan isbeddel weyn baa ku yimid oo waddamadii iyo shirkadihii xumaa ee awal Galbeedka ka baqi jiray dabo ka dadan maayaan. Dagaallo na waa laga cabsi qabaa in ay kala dhex maraan Ruushka iyo dalalka Midowga Yurubta isku baheystay ee ay Sweden ku jirto. In aynu midnimadeenii soo ceshanno oo tuugadan Hargeysa iyo Xamar ba dalkeenii xaraashay is ka qabanno si jiritaankeena dambe ayay dantu oogu jirtaa. Adduun waa isbeddelay.